အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး ဓာတ်မတည့်ဖြစ်တတ်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်မယ့် Mega-mushroom relief & resilience soothing treatment lotion! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး ဓာတ်မတည့်ဖြစ်တတ်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်မယ့် Mega-mushroom relief & resilience soothing treatment lotion!
အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး ဓာတ်မတည့်ဖြစ်တတ်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်မယ့် Mega-mushroom relief & resilience soothing treatment lotion!
အသားအရေဆိုတာ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်သာမက အမျိုးသားတွေအတွက်ပါ အရေးပါအရာရောက်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ရန်အတွက် အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်ရရုံသာမက ပျက်စီးသွားတဲ့အသားအရေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းနဲ့အပြင် လုပ်ဆောင်ခြင်းညီမျှမှသာ စိုပြေကျန်းမာတဲ့အသားအရေကိုရရှိမှာပါ။ ရေများများသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်သလိုပဲ အသားအရေစိုပြေအောင် Lotion တမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အရေအသွေးကောင်းပြီး ခြောက်သွေ့နေတဲ့အသားအရေအတွက် အထူးသင့်တော်မယ့် Product လေး Mega-mushroom relief & resilience soothing treatment lotion နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Lotion ဟာ Alchohol free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသားအရေ ခြောက်သူတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်ခြင်းရှိသူတွေအတွက် အထူးအဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီ Product မှာ Reishi ခေါ် မှိုတမျိုးကိုအခြေပြုထုတ်လုပ်ထားပြီး အသားအရေရှိ PH Level ကိုပြန်လည်ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ စေးထိုင်းခြင်းမရှိပဲ ရေဓာတ်ကိုအခြေခံထုတ်ထားတာကြောင့် အသုံးပြုရတာပေါ့ပါးတဲ့ Lotion အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးပြီးချင်း အသားအရေလေးချောမွတ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး စိုပြေလာတာကိုလည်းလက်တွေ့ခံစားရမှာပါ။ Reishi မှိုဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာဆေးအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ရေချိုးပြီးခါစ ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော နီမြန်းခြင်းတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
အသုံးပြုမယ့်အခါ ပုလင်းကို သေချာ Shake လုပ်ပြီး လက်ဖဝါးအပေါ်အရင်ထည့်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ်းပေးပါ။ မနက်တကြိမ် ညတကြိမ် ပုံမှန် Skin care အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.origins.com
ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေကို ပိုးသားလေးအသွင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Super Moisture Shampoo!
ပစ္စည်းတမျိုးတည်းနဲ့ သုံးမျိုးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Photo Finish Primer Waters!